Waa maxay sababta keywords Google Hiding ay u fiicantahay suuqleyda | Martech Zone
Waxay umuuqataa in qof kastaa uu cabaadayo oo uu ku jahwareerayo Google ma bixinayo xogta ereyga muhiimka ah Falanqaynta. In kastoo aan aaminsanahay inay hoos u dhigeyso qiimaha Analytics xoogaa, waxaan ku doodi lahaa inay tahay dhaqaaq weyn oo caawin doonta waxyaabaha Suuqgeeyayaasha ah. Waxaan horey u qoray in SEO waa dhintay oo waxaan daawaday sida warshadaha ay si tartiib tartiib ah u tageen. Tani waxay noqon kartaa ciddiyaha ugu dambeeya ee naxashka ku jira.
Haddii aan ka dhawaajiyo farxad, waa sababta oo ah aniga ayaa ah. Waxaan tan ku qoray wareysi lala yeeshay macaamiishayada otomaatiga suuqgeynta, Xaqiiqda Isdhexgalka:
Tallaabada Google ee xannibidda raadinta dhammaan ereyada muhiimka ah waxay ka dhigeysaa nolosha suuqleyda mid aad u adag, laakiin macquul maahan. Suuqyayaashu wali waxay awoodi doonaan inay la socdaan sicirka gujinta iyada oo la adeegsanayo xogta Webmaster si loo fahmo sida taraafikada dabiiciga ahi u saamaynayso dadaalkooda guud ee suuq geynta. Hadday wax jiraan, tani waxay sii socotaa inay naga dhigto kuwo si fiican uga ganacsada. Waa inaan diirada saarnaa qorista waxyaabaha qiimaha u leh dhagaystayaasheena iyo dhageysiga dhagaystayaasheena - ma cayrino ereyada muhiimka ah, maareynta goobaha, iyo raadinta xiriiro si dabiici ah u kobciya qiimeyntayada raadinta.
Tani waxay si gaar ah ugu fiicantahay ganacsiga celceliska ah ee aan lahayn miisaaniyad ay ku maal gashato istiraatiijiyadda SEO si ay u soo saaraan waxyaabo keyword-hodan ku ah shabakadda oo dhan si ay si macmal ah u sarreeyaan darajada waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Inteena ugu badan lama tartami karno shirkado waaweyn iyo warshad koror ku gaadhay balaayiin doollar. Meesha faa'iido lacageed laga helo si loo khiyaamo, shirkaduhu way khiyaanayn doonaan. Wershadduna way khiyaameyneysay (iyo qish iyo qiyaano). Qaar badan oo ka mid ah ciyaartoydu waa ku khiyaaneeyaan xeeladahooda laakiin way cadahay in Google uusan ahayn. Google waxay dooneysaa in taraafikada dabiiciga ah ay ahaato mid dabiici ah, oo aysan kaxeynin shirkadaha SEO ee hodanka ah ee haysta sanduuqyo ciid ah oo malaayiin doolar ah si ay u soo bandhigaan siyaabo lagu khiyaameeyo macaamiishoodana loo kala saaro. Isbedelka Google wuxuu dhaawacayaa dadkaas - adigu ma tihid.
Iyo, intaad awoodi kari weydo inaad erey gaar ah u yeelatid rajo gaar ah, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato in qofkaasi ku yimid asal ahaan iyo bogga uu sameeyay. Ogaanshaha mawduuca bogga gelitaanka rajadaadu waxay ku soo gaadhay goobtaada waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u fahamto waxyaabaha bixinaya qiimaha. Iyo sameynta cilmi baarista ereyga muhiimka ah iyo cilmi baarista tartanku wali waxay daaha ka qaadi kartaa fursadaha helitaanka iyo qorista waxyaabo dheeri ah oo la heli doono oo qiimo leh. Raadinta raadinta ayaa aasaas u ah istiraatiijiyad kasta oo nuxur leh, laakiin qorista iyo wadaagista waxyaabaha kafiican (qoraal, hadal iyo muuqaal ah) ayaa had iyo jeer ka fiicnaan doonta hagaajinta cinwaannada bogagga ama cufnaanta ereyga ee bogga.
Farqiga u dhexeeya xogta Webmaster, Macluumaadka Mawduuca, iyo xogta Falanqaynta waa inay kaa caawiyaan inaad xoojiso awoodda aad u leedahay inaad horumariso waxyaabo weyn. Halkii aad ugu boodayn lahayd qaybta ereyada muhiimka ah Analytics, waa inaad kudhex gasho taraafikada cinwaanka bogga si aad u fahamto qodobbada bixiya taraafikada ugu badan shirkaddaada. Erayada ereyada muhiimka ahi way mashquulinayeen waxayna suuqyo badan ka dhigeen caajis. Kaliya waxay sii wadeen inay qoraan sheeko si ay u wadaan taraafiko badan oo ku saleysan ereyada muhiimka ah halkii ay diiradda saari lahaayeen guud ahaan waxyaabaha soo jiitay dareenka ugu badan.
Xaqiiqdii ma jiraan wax xog ah oo ka tegaya daloolka awoodaada aad ku horumarin karto istiraatiijiyad ka kooban waxyaabaha cajiibka ah. Weli waad dib u eegi kartaa xogta Webmaster si aad u fahamto ereyada muhiimka ah ee keenaya waxyaabaha ugu badan - laakiin waad ku dabaqi kartaa waxyaabaha ku jira ee keenaya aragtida iyo isbeddelada ugu badan. Fahamka macnaha guud ee ereyada muhiimka ah ee aad wax ka qoreysay waxay ku siin karaan tan aragti dheeri ah waxa caan ah ama aan caan ahayn.
Tusaale ahaan, inaad diirada saarto 'keywords google-ka lama bixin' waxay ii horseedi kartaa qoraallo kooban oo ku saabsan isbeddelka iyo xalalka kale. Taa baddalkeeda, waxaan diiradda saarayaa halkan sida ay u caawinayso suuqleyda. Macnaha guud waa inuu ugu dambayntii caddeeyaa inuu qiimo badan u leeyahay istiraatiijiyaddayda mawduuc ka badan kaliya ku tuurista isku-darka ereyga muhiimka ah hareeraha! Macnaha guud ee hareerahaaga ereyada muhiimka ah waa inuu noqdaa mid diiradda u saaran sidoo kale!
Waa in la ogaadaa in qaar ka mid ah bixiyeyaasha Analytics ay qaadanayaan qaabkan, sidoo kale. Fiiri GinzaMetrics: Astaamaha Cusub ee GinzaMetrics Platform Cinwaanka Raadinta Amni ee Google (Keyword Lama Bixin) Cusbooneysiinta.
Tags: Analytics googlekeywords googlekeyword lama bixinaan la bixin
Uberflip Macluumaadka Suuqgeynta Hubs
Oktoobar 10, 2013 at 8:59 PM
Tani waxay i xasuusinaysaa raadraaca ereyga muhiimka ah ee Raven oo xidhaya sanad ka hor. Ninka SEO-ga ah ee miiskayga dul yaal wuxuu lahaa talooyin wanaagsan oo ku saabsan degelkayga. Midkood wuxuu diirada saarayay calaamadeynta halka sida uu sheegayo, mar haddii ereyada raadinta ee Maamulaha shabakadu ay ku helayaan wadadaada bartaada qaab macno ahaan ah, markaa istiraatiijiyaddaada calaamadeynta ayaa shaqeynaysa. Tan iyo markii aan ka tirtirinayno shuruudaha raadinta soo socota ee Falanqaynta, waxaa jira xalal lagu shaqeyn karo tan.
Oktoobar 11, 2013 at 12:41 AM
Waad ku mahadsan tahay qoraalkan. Qaado waqti aad si kooban wax ugu fahamto oo aad ku falanqeyso suuqgeynta waxyaabaha ku jira waxaadna ogaan kartaa habab lama filaan ah oo aad ku wadi karto natiijooyinka ganacsi ee wanaagsan.
Oktoobar 11, 2013 at 8:44 AM
Runtii waqti aad ufiican baan ku qaatay markaan aqriyay .. Wax badan wargelin .. Waad ku mahadsantahay wadaagistaada!
Oktoobar 15, 2013 at 9:58 AM
Waan ogolahay 100%. SEO wuxuu ku dhashay cabsi darteed oo uusan fahmin suuqgeynta dhijitaalka ah. Google ayaa barbareyneysa goobta ciyaarta. Tani waa bilowga suuqgeynta ku soo noqoshada suuqgeynta internetka. Waxaa jira 1000s shirkado SEO ah oo celcelis ahaan ka ah kuwa ugu suuq fiican. Laakiin iyagu waxay isu muujiyaan inay yihiin khubaro SEO ah. SEO waa suuq geyn. SEO maahan nidaam farsamo sare oo kaliya dadka aqoonta sare leh ayaa maarayn kara. Waxay u egtahay in dhammaan shirkadaha SEO lagu qasbi doono inay bartaan suuqgeynta 101.
Jan 19, 2014 at 11: 27 AM
Haa runtii! Halkii aan ugu boodayn lahayn qaybta keywords ee falanqaynta, waa inaan ku boodno taraafikada cinwaanka bogga si aan u ogaanno qodobbada bixinaya taraafikada ugu badan shirkadeena. Sidoo kale waxaan u maleynayaa in ereyada muhiimka ah ay ka dhigeen suuqleyda qaar caajis. Qaar ka mid ah waxay sii wadaan inay qoraan "wax aan micno lahayn" si ay u wadaan taraafiko badan oo ku saleysan ereyada muhiimka ah halkii ay diiradda saari lahaayeen waxyaabaha guud ee muhiimka ah.
Jan 21, 2014 at 11: 55 AM
Haa xogtu waa inay gacan ka geysataa sidii loo xoojin lahaa awoodda lagu horumarin karo waxyaabaha waaweyn. Bogagga degitaanka waxaan xoogga saari karnaa waxa booqdayaashu u muuqdaan / ka arki karaan bartayada.